Ogaden News Agency (ONA) – In Kabadan 50 Maxaabiis Ah oo Isu Dhiibay Jabhada Gimbot 7.
In Kabadan 50 Maxaabiis Ah oo Isu Dhiibay Jabhada Gimbot 7.
Posted by Dulmane	/ November 28, 2016
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Gonder ee Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya in ay xabsiga magaalada ka baxsadeen maxaabiis aad u badan oo kamid ahaa maxaabiistii u xidhnaa wayaanaha.
Sida xogta aan kuhelay waxaa ooda jabsaday inkabadan 50 maxaabiis ah oo kasoo jeeda qoomiyada Axmaarada oo ku xidhnaa xabsi kuyaalada Magaalada Gonder kuwaas oo mudo u maxaabiisnaa kooxda TPLF.
Maxaabiista baxsatay ayaa lagu soo waramayaa in ay intooda badan isudhiibeen jabhada Gimbot 7 Arbanyoj ee kadagaalanta Gobolka Axmaarada halka inta soo hadhayna ay ugaleen beeralayda xabashida ee kadagaalanta agagaarka magaalada Gonder.
Ma aha markii ugu horaysay ee dad shacab ah oo uxidnaa kooxda TPLF ay ooda jabsadaan isla markaana ugalaan jabhadaha hubaysan waxaana laxasuusan yahay maxaabiis kamid ahaa kacdoon wadayaasha oo horaan isugu dhiibay jabhadaha hubaysan.
Dadka kacdoon wadayaasha ah ee u dhashay qoomiyadaha Axmaarada iyo Oromada ayaa si isdaba joog ah ugu biirayay jabhadaha kadagaalama Oromia iyo Gobolka Axmaarada halka ay jiraan shacab iskood isu abaabulay oo doonaya in ay afka dhulka udaraan taliska Wayaanaha.
Sikastaba ha ahaatee waxaa aad usii yaraanaysa rajada ay kooxda TPLF ka qabto in ay joogsadaan kacdoonada shucuubta kala duwan ay wadaan waxayna kooxdu hada bilowday daba goosi iyadoo ninba waxa uu hayo uu meel ku hubsanayo.